यी सुन्दरी युवतीले त्यस्तो के गरिन जसका कारण देशै छोड्नु पर्यो ? थाहा पाउदा तपाई पनि अचम्ममा पर्नु हुनेछ ! – Kavrepati
Home / रोचक / यी सुन्दरी युवतीले त्यस्तो के गरिन जसका कारण देशै छोड्नु पर्यो ? थाहा पाउदा तपाई पनि अचम्ममा पर्नु हुनेछ !
यी सुन्दरी युवतीले त्यस्तो के गरिन जसका कारण देशै छोड्नु पर्यो ? थाहा पाउदा तपाई पनि अचम्ममा पर्नु हुनेछ !
admin July 10, 2021	रोचक Leaveacomment 85 Views
नेपालमा कुन काम महिलाले कुन काम पुरुषले गर्ने भनेर गरिएका निर्धारणहरु बिस्तारै हट्दैछन् । महिला र पुरुष दुबै बराबर हुन् भन्ने मान्यताले ठाँउ पाउँदैछ, जुन समानताको एक उदाहरण पनि हो । तर सबै देश नेपाल जस्तै छैनन् ।
अब अफगानिस्तानलाई नै हेरौं, त्यहाँ एक युवतीले साइकल चलाउने इच्छा राखिन् तर उनको इच्छामा तालिवान भन्ने एक समुह बाधक भयो । उसले ती सुन्दरीको ज्या नै लि ने सम्भावना बढेपछि उने देशै छोड्नु पर्यो । तर अफगानिस्तानकी ती साइकल खेलाडी मासुमाह अली जादाले शरणार्थी ओलिम्पिक्स टोलीबाट टोक्यो ओलिम्पिक्समा सहभागी हुने आशा गरेकी छन् ।
तालिबानबाट ख त रा हुन सक्ने र महिला साइकल खेलाडी भएका कारण परेको सामाजिक दबावका कारण सन् २०१६ मा परिवारसहित उनले अफगानिस्तान छाडिन् । उनी अहिले शरणार्थी रूपमा फ्रान्समा बस्छिन् । सन् १९९० को दशकमा अफगानिस्तानमा तालिबानको शासन हुँदा बालिकाहरूलाई विद्यालय जान निरुत्साहन गरिन्थ्यो र महिलाहरूलाई काम गर्न दिइन्थेन ।
अफगान सरकार र उसका सहयोगीहरूले त्यसयता तालिबानसँग यु द्ध गरिरहेका छन्। पछिल्ला केही महिनाहरूमा सर्वसाधारण र त्यसमा पनि विशेषगरि ख्याति कमाएका महिलाहरू लक्षित तालिबान आ क्र म ण बढ्दो क्रममा छ ।
Previous नाबालक विवेक घटनाको रहस्य खोतल्दै प्रहरी पुग्दा दिदीले दिएको त्यो बयान….
Next सानै उमेरमा संसार जितेकी चर्चित तेरिया मगर अहिले १८ बर्षकी भईन, मुम्बईमा बस्छिन् र लाखौ कमाउछिन हेर्नुहोस-